News Archives - Page 99 of 99 - Super Union
ပထမကမ္ဘာ စစ်အတွင်းက နာမည်ကျော်ခဲ့သော ဖုတ်ကောင် စစ်သည်တော် များ
ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းက နာမည်ကျော်ခဲ့သော ဖုတ်ကောင် စစ်သည်တော် များ မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် သိန်းနှင့်ချီသော အသားစားဖုတ်ကောင်များ ပြေးဝင်လာပြီးမည်းမည်းမြင်ရာကို တိုက်ခိုက်ကာ သတ်ဖြတ်စားသောက်ကြသော ရုပ်ရှင်၊ ဗွီဒီယိုများကို ကြည့်ဖူးမည်ထင်ပါသည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်၊ ဗွီဒီယိုများမှာ စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာတို့၏ စိတ်ကူးထဲမှ ဇာတ်လမ်းသက်သက်သာဖြစ်ပြီး …
01/01/2021 By fella News
ရုရှားနိုင်ငံထုတ် ရေငုပ်သင်္ဘောတွေမှာ ပြတင်းပေါက် ပါရခြင်း အကြောင်းအရင်း…
ရုရှားနိုင်ငံထုတ် ရေငုပ်သင်္ဘောတွေမှာ ပြတင်းပေါက် ပါရခြင်း အကြောင်းအရင်း… ပြီးခဲ့တဲ့ ရေတပ်မတော်နေ့မှာ တပ်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးရေငုပ်သင်္ဘော မင်းရဲသင်္ခသူပုံတွေကို မြင်ပြီးသွားကြတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ Conning Tower မှာ ပြတင်းပေါက်တွေပါတာကို သတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်၊ အဲဒီလိုမျိုး ပြတင်းပေါက်တွေက …
တရုပ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်အစိုးရ ရဲ့ တရုတ်တစ်မျိုးတည်းရှိရေးမူဝါဒ ( မြန်မာ -တရုတ် နယ်စပ်က “ဝ” ကိုးကန့် ၊ မိုင်းလား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေ တရုတ်အစိုးရ ရဲ့ ဩဇာ လွှမ်းမိုးခံနေရတဲ့ ဒေသတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာလည်း ရှီကျင့်ဖျင်အစိုးရရဲ့ တရုတ်တစ်မျိုးတည်းရှိရေး ဝါဒရောက်လာမည့် အရေးကို စိုးရိမ်စရာရှိပါတယ်။)
တရုပ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်အစိုးရ ရဲ့ တရုတ်တစ်မျိုးတည်းရှိရေးမူဝါဒ ( မြန်မာ -တရုတ် နယ်စပ်က “ဝ” ကိုးကန့် ၊ မိုင်းလား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေ တရုတ်အစိုးရ ရဲ့ ဩဇာ လွှမ်းမိုးခံနေရတဲ့ ဒေသတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာလည်း ရှီကျင့်ဖျင်အစိုးရရဲ့ …
ကမ္ဘာကျော် အမေရိကန်ကြည်း တပ် တွင် အသုံးပြုဖို့ကြံရွယ်နေသည့် အရွယ် စုံ စစ်သုံး ရိုဘော့တင့်ကားများ အကြောင်းတစေ့တစောင်း …
ကမ္ဘာကျော် အမေရိကန်ကြည်း တပ် တွင် အသုံးပြုဖို့ကြံရွယ်နေသည့် အရွယ် စုံ စစ်သုံး ရိုဘော့တင့်ကားများ အကြောင်းတစေ့တစောင်း … အမေရိကန်ကြည်းတပ်ဟာ အနာဂတ်စစ်ပွဲတွေမှာ ရိုဘော့တစ်တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်အရွယ်စုံ ကိုအသုံးပြုပြီး တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက် စီမံလျက်ရှိပါတယ်။ဒီယာဉ်တွေရဲ့ အရွယ်အစားတွေမှာ အပေါ့စား၊ အလတ်စားနဲ့ …
ရုရှားတွေ ဘာလို့ နူကလီးယား လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေ မတည်ဆောက်လည်း? (ဒါမှမဟုတ်) အမေရိကန်တွေ ဘာလို့ ဒီဇယ်ရေငုပ်တွေ မတည်ဆောက်သလည်း? (*မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ကူးယူဖော်ပြနိုင်ပါသည် *) ဒီမေးခွန်းတွေကို ခဏခဏ ‌တွေ့ရမြင်ရကြားရဖူးမှာပါ။ အမြင်တွေလည်း အမျိုးမျိုးရှိမှာပါ။ ကျွန်တော့် …
ရုရှားက ပြင်သစ်ထုတ် အဆင့်မြင့်လေကြောင်းစနစ်များတပ်ဆင်ထားသော Su-30 တိုက်လေယာဉ်များကို ဘီလာရုစ်သို့ပေးပို့ များပြားလှစွာသောသတင်းအစီရင်ခံမှုများအရ ဘီလာရုစ်အနေဖြင့် အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ် Su-30SM တိုက်လေယာဉ်စနစ်များကို ရုရှားထံမှလက်ခံရရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါစနစ်များတွင် ပြင်သစ်နာမည်ကျော်ကုမ္ပဏီ Thales ထုတ် အဆင့်မြင့် Man-Machine-Interface System များကို …
ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြား ကန်စစ်သင်္ဘော ဖြတ်သန်းမှု တရုတ်ကန့်ကွက် ( ခြိမ်းခြောက်မှန်သမျှကို သာကောတို့ တုန့်ပြန်ဖို့ အသင့်ရှိတယ်လို့ ကြုံးဝါးလိုက်ပါပြီ….) တိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားကနေ အမေရိကန် စစ်သင်္ဘောကြီး ၂ စင်း ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး …
ယနေ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ဖွင့် (၂၃) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ်..
ယနေ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ဖွင့် (၂၃) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ်.. သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကဂ ၄ဝ၆၁ဝ၄ သိန်းတစ်သောင်း ဓ ၇ဝ၈၉၅၉ သိန်းငါးထောင် ကင ၈၇၅၇ဝ၇ ဏ …
ယခုခေတ်မှာ အချစ်စစ်ရှိရုံမရတော့ဘူးဆိုတာ သက်သေပြချက် ( သို့မဟုတ် ) ရွှေ (၁) ပိသာ၊ ငွေသား သိန်းပေါင်း (၃) ထောင် နဲ့ တင်တောင်းခံလိုက်ရတဲ့ သတို့သမီး
ယခုခေတ်မှာ အချစ်စစ်ရှိရုံမရတော့ဘူးဆိုတာ သက်သေပြချက် ( သို့မဟုတ် ) ရွှေ (၁) ပိသာ၊ ငွေသား သိန်းပေါင်း (၃) ထောင် နဲ့ တင်တောင်းခံလိုက်ရတဲ့ သတို့သမီး ယခုခေတ်မှာ အချစ်စစ်ရှိရုံနဲ့ ဘဝကြီးပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုတာကလည်း 100% …
ထိုင်းတွင် အမျိုးသား ၃ ဦး ထိမ်းမြားလက်ထပ် မင်္ဂလာဆောင် ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း၊ ကျန်ထပူရီမြို့မှာ သမရိုးကျဖြစ်စဉ်တွေထက် တမူကဲတဲ့ အမျိုးသားချင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းတဲ့ မင်္ဂလာပွဲတစ်ခု ပြီးခဲ့ရက်ပိုင်းက ကျင်းပသွားပါတယ်။ အဲဒီထက်ပိုထူးတာက ၂ ယောက်စုံတွဲမင်္ဂလာဆောင်တာမဟုတ်ဘဲ အမျိုးသားတွေချည်း ၃ …